Par: MITRAKA LALANDAVA
Date: 14 février 2018 - 15:18
Ho anareo lehilahy nanely zanaka ivelan'ny fanambadiana tany anelankelantrano no iantefan'ny fanontaniana, afaka mamaly koa zay mety ho voa na tsia koa aza,
Mbola azo itokisana ve ianareo reny na efa nifona tam ilay vady andefimandry aza ? satria mbola fantatra fa mbola mamangy matetika ilay zaza sy ny reniny zay fantantr'ity farany tsara fa efa manambady ?
Ianao ihany no mahita azy fa amiko efa dingana lehibe ny nilazany taminao ny fisian'io zaza io. Ny fotoana manova zavatra be dia be. Izy rahateo koa efa nifona taminao izany hoe miaiky izy fa tsy nety ny nataony. Olombelona ka mety ho potraka.
Misy fanontaniana mila apetrakao amin'ny tenanao fotsiny :
1- Inona no farany azonao leferina
2- Efa manambady ve io olona niterahany io amin'izao. Ilay fifandraisana aloha mety tsy ho azonao sakanana satria misy zaza iraisana, ny vola ihany koa, olona miasa ve izy sa tsia ? Sarotsarotra kokoa manko raha sahirana aram-pivelomana ilay vehivavy satria mety hiantehitra be ami'ny vadinao
3- Firy ny zanakareo, rehefa misy zaza dia sarotra kokoa ny tsy hiezaka hifamerina hifampatoky
4- Inona no tena anton'ilay fifaneraseran'izy roa
5- Io zaza io ihany ve no zanak'ilay vehivavy sa misy hafa koa.
Date: 17 février 2018 - 16:37
Mbola zaho ihany.
Ahoana moa niassurénao na ny vadinao fa tena zanany tokoa ilay zaza, matoa izy niteraka tamin'ny vadinao dia olona mampihomehy izy izay matetika surtout raha efa fantany fa manambady ny vadinao. Eto amintsika koa moa tsy sura hoe misy ireny test ADN ireny dia rehefa miteny ny iray dia ekena. Marina aloha fa matoa manaiky hoe rainy ny vadinao dia efa niaraka tamin'io olona io fa izany tsy midika fa izy irery no niaraka taminy. Sao ataon'ny olona fakana vola sns fotsiny koa ny vadinao nefa sanatria tsy izy akory no rain'ilay zaza. Raha niteraka hafa ohatra ilay vehivavy afaka lazainao ny vadinao hoe sao ilay rain'io zaza hafa io ihany koa ny rain'ny zaza iray. Misy olona mahafantatra ve ny manodidina anao na ny manodidin azy mikasika io zaza io ? Raha ny vadiko angamba no miteraka any ivelany ataoko mahita, mampirafy aloha ohatrany efa aretina hiraisany.
Ilay vehivavy ohatran'ireny koa anie mampihomehy, iny lehilahy mihitsy no mahagaga. Matetika ilay sipaina aty ivelany aty tsy mamely akory, olona tsy dia mahay tsy dia mankaiza fa jejojejo sady resaka filana ara-nofo fotsiny dia izay hanakorontanana tokantrano. Ilay sipa amin'io matetika ianao vadiny aza mbola tsara sy mahita fianarana sy miasa tsara, olona honete kokoa. Raha tena mandinika tsara ny lehilahy mahita hoe tsy hita izay ho resahana aminy hafa tsy hoe esory ny akanjo anga.
Somary tsy dia misy visibilité ny sujetnao fa nampisalasala be ny titreny.
Par: marina tokoa
Date: 19 février 2018 - 12:37
Marina tokoa ny voalazan'i zaho ihany. Izaho zao tafiditra tato anaty sujet fa ataoko fa zanak'ampielezana any ampiangonana no resaka hay tokoa moa izany no filaza ireny zaza ireny dia mba mandray anjara kely e.
Mitovitovy amin'ny hevitr'izy roa ihany fa aminao fotsiny inona ilay atao hoe matetika, ianao manko nilaza hoe mamangy matetika ? Amiko ianao en position de force ary tsy tokony anjaran'ilay vadinao mihitsy no hametraka ny lalana sns marina fa zanany fa anga niera taminao izy nanao an'io. Apetrao tsara daholo ny fepetra rehetra mety hahatonga anao hiverina hahatoky azy indray. Raha izy no nitantana ny vola teo aloha dia ianao ary ny vola izay tena ilainy ihany no omenao azy, amin'izay aloha tsy miasa ny sainao hoe laniny nohanina ny vola sa nomeny olona hafa sady ny sipa koa tsy tia bandy tapaka izany dia efa vitsy ny chance hoe hiodina atsy na aroa.
Raha tena mankarary anao ny fandehanany mijery ny zanany dia lazao azy mazava tsara fa tsy mety aminao satria mampatsiaro anao le toetrany sy le fitaka nataony taminao, ny fieritreretanao hoe any amin'ilay zaza izy izay na ny fahitanao le zaza koa vao mainka mety hampatsiaro anao foana ny zava-nitranga. Mila mijery ny tenanao koa ianao fa tsy ze marimaritra iraisana foana.
Izay no azoko hanampiana.
Date: 28 février 2018 - 12:30
Ny lehilahy tsy azo hatokisana rehefa nahavita tranga toy izany, fa enao vadiny no mandray andraikitra izay tinao atao amin'izay fotoana izay, haritrao dia mipetraka, tsy haritrao dia misaraka, tsy hoe nigogogo nitomany izy na nifona antanandroa na nilelapaladia fa tsy hanao intsony dia hoe marina izany, TSIA ny valiny satria efa nanao indray mandeha izy ka iza no hanakana azy tsy hanindroa? tsy misy porofo azo raisintanana hoe tsy hanao intsony izy, fa dia hoe efa voa enao vadiny dia enao no mametraha fanontaniana
Par: aiza kosa
Date: 28 février 2018 - 12:41
Aiza kosa e ? Hainao ilay fitenenana hoe izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Samy efa nanao ny tsy nety avokoa ny rehetra fa misy ny tena manenina tsy mamerina intsony, misy ny mody manenina nefa any ambadika any ny ataony ihany no ataony. Fa na nanenina izy na tsia ianao vadiny foana no tompon'ny lakilé na hanaiky azy na tsia.
Date: 28 février 2018 - 15:27
Misy karazany roa ny zanaka ampielezana: ny iray ilay vita talohan'ny nanambadiany ilay tena vadiny. Ny faharoa ilay nataony nandriatra ny fanambadiana.
Ilay voalohany azo leferina ihany raha nitsitra izy fa misy ZAP vita tany ka rahamazoto ianao de tokony ekenao ny fisiany ary tsy tokony atao hanakorontanana tokatrano. Mbola azo itokisana izy amin'io
Ilay faharoa kosa tena tsy azo andeferana fa fanitsakitsahana tokatrano fotsiny izao.Tsy azo atokisana intsony izy amin'io fa tanana zatra mitsotra.
Ka iza amireo no misy anao ry MITRAKA LALANDAVA?
Par: tsara famaritana
Date: 28 février 2018 - 21:09
Bendaka, tsara be ilay famaritanao ny atao hoe zanak'ampelezana. Fahatokisana mety mbola azo eritreretina nefa fa mety oe mila ftoana angambany. Tsy ny tompon'ny sujet rery no tratran'io fa otrany mahita solution doly ihany ny olona
Par: MITRAKA LALANADAVA
Date: 02 mars 2018 - 13:23
Voaray avoko ny hevitrareo rehetra, mankasitraka, ilay cas faharoa no misy ry BENDAKA ah
Date: 02 mars 2018 - 15:23
Ahoana akia ny nataondry fa ny ahy ny vadiko efa fatampoko fatampirenena fa mampirafy velona ohatr'ireny inona ireny fa tsy mba mety mitsotra fa lainga daholo ny mivoaka ny vavany. Zary fiaramonina sisa ilay tokantrano, mikipy fotsiny aho satria ny zanakay no tsinjovina sisa.
Maharikoriko ahy na ny mahita azy aza indraindray, miova be ve ny olona sa manafin-toetra rehefa mbola miaraka fotsiny fa rehefa zatra amin'izay dia manao toetr'alika.
Izaho misy olona fantatro 4 be izao ny zanak'ilay rangahy amin'ilay sipany tsy tahotra tsy henatra. Ny ahy izao no tena mahakamo ahy satria tsy fantatro hany ka lasa saina lava aho hoe misy sa tsy misy (tsy ny sipa io fa iny dia misy dia misy fa ny zanaka hanelakelantrano). Leo be aho izany, mampi-déprime daholo ny ato amin'ny forum problèmes conjugaux.
Izaho kosa aloha raha mahatratra tonga dia tefaka daka totondry. Ataoko mangana mihitsy.
Date: 09 mars 2018 - 14:41
Déprimant <<< Nga misy hoe nitsotra zany fa nandeha teny ny andro sy ny volana ary ny taona dia nipoitra ho azy teny fona ny marina e!! mieritreritra ny tena ho ketrina sy tena badraodra loatra, tsika mandinika miadana mangingina ! dia tsy afa niala eh, nibaboka nefa hitako hoe mbola misy lainga tao anatiny ilay nahazoana ilay zaza, avelako fona ho tsarain'ny karatra eo.
Date: 09 mars 2018 - 17:24
Mba ratsy koa akia izany, efa tena aman-taonany mihitsy ve vao mahazo valiny. Mahereza foana akia dia mitraka lalandava. Izahay izao efa ho folo taona nivadiana fa ny ahy izany soupçon no tena betsaka, tsy soupçon moa izany fa resy lahatra aho satria fantatro ny vadiko, miresaka lava olona tsy fantatra amin'ny téléphone, manjavona tsy hita izay alehany, antsoina tsy mandray téléphone. Mba miteny azy akia, za indray no lazainy fa hoe saropiaro loatra hono.
Indray andro henoko niresaka tamin'ny téléphone fa noheveriny tsy tao antrano aho ny resaka tsy henoko tsara fa henoko hoe feona vehivavy dia rehefa nanontaniako dia lazainy mpiaramiasa fa miasa asa maika tsy maintsy vonjeny hono andro amin'io asabotsy hariva. Za te hahafantatra tsy te hahafantatra satria raha marina ny eritreritro inona ary no ataoko, tsy azoko antsaina fa ilay miaina anaty hatezerana aloha tena manomboka mankarary ny foko.
Asehoy azy akia hoe iza no tena ketrina. Vehivavy tsy very mandeha
Par: ianao no mandidy
Date: 12 mars 2018 - 10:41
deprimant > Aza midéprime izany akia fa misy solution daholo ny probleme rehetra a. Raha zaho manokana aleoko tsy fantatra, matoa tsy lazainy amiko dia tsy misy dikany izay any ambadika any. Tsy atao hankarary saina, raha milaza amiko indray izy dia izaho no mametraka ny condition. Tsy mahazo miresaka ny momba izay zanany any ivelany any ao an-tranoko, ny vola miditra vola miditra ihany fa raha misy fanampiany tiany atao ho an'ny zanany tsy amin'ny volanay no hanabangany fa midemerda izy, ny fotoana dia mila fankatoavana avy aty amiko. Ny zanako aloha no priorité satria ireo no nifanarahanay.
MITRAKA LALANDAVA > Mahafinaritra ny pseudo-nao. Aleo izy no hofatoran'ny laingany irery eo, ny zavatra andrasanao aminy mikasika ny zanakao aza ovaina satria izy no te hiteraka any ivelany any, ianao manana projet amin'ny zanakareo. Matetika manko izy ireo mieritreritra hoe satria fantatrao ny fisian'ny zaza dia mety daholo izany ny ambiny. Ny fahafantarana tsy midika fa manaiky ianao. Tandremo ny débordement satria indray mandeha izy miresaka io zanany io ao antranonareo dia ho avy tsikelikely ny ambiny dia ianao indray no ohatrany mangatak'atiny.
Ny tena sarotra aminy ry MITRAKA LALANDAVA dia ilay fianakaviana. Ianao izao mety mahatsapa voageja, hilaza ny fianakavianao ve sa tsia, inona no ho eritreritr'ireo ?
Ahoana ny fianakaviany ? Mijery io zaza sy ny reniny io koa ve fa mety afenin'ireo anao ihany koa. Matetika manko ny grands parents no tena tsy maharitra satria hoe zafikely dia zafikely dia ohatrany ianao lehibe indray no marary saina sy ratsy nefa ny zanaka no harovana.
Fa tena betsaka ny tokantrano tratran'ny olana tahakan'io.
Date: 12 mars 2018 - 15:29
ianao no mandidy <<<< misaotra namaly : fa izy aza tena tsy te hiresaka momba io zaza io mihitsy nefa fantatra be hoe mandeha matetika any fa tena manafina e ! lehilahy be mystery zay le vadiko, efa 15 taona nivadina zay zao fa harako aby zay miainga na tsy manaramaso b zay alehany sy ataony aza aho, ny misy io rafy io aloha hitako ee !! saingy am zao ts maka areti po mitsikilo tsony.
Ny amin'ny fianakaviko indray tsy misy mahalala atreto satria ilay vadiko dia miseo anjely sy mifandray tsara amin'ireo, ny andro kely sisa iainanan'ny ireo RAR tsy entiko am-pahoriana azy ireo, zay no tena safidiko, haiko tsinona fa tsy mety amin'ny fahasalamana mamako izany. Ny iray tam-po indray mbola tsy hay zay mety ho fiovanan-kevitro any aorina, fa atreto aloha dia tazomiko ho ahy samy irery zany.
Ny fianakaviany ndray tsy fantatro mazava na mahalala na tsia, zay koa tsy dia mifandray (tsy miady nefa tsy hoe miresaka be)
Ny saina no amboarina be ry déprimant ah ! mila miomana amin'ny zavatra rehetra isika, indrindra ianao zany efa mahatsikaritra. tsy toe tsaina mihiba akory zany fa fanamboaran-tsaina dieny zao. MAHEREZA
Par: futur belle maman
Date: 15 mars 2018 - 20:21
Mitraka lalandava <<< za koa otranao saingy vao 5 ans latsaka izahay no nivady izy koa dia Feno mistery. Hendry sy modely imason'ny fianakaviana. Fantatro izy fa miaraka amin'ny sipa eny ndraindray fa ny tsy nampoiziko dia bevoka ilay sipa ary ho teraka atsy ho atsy. Izy no nanambara satria hanao acte de reconnaissance ono izy satria zanany. Vaky ny foko satria tsy nieritreritra izay aho saingy indrisy.
Inona no azoko atao hanakanana izay ? Ratra vao nena satria vo herinandro izay no fantatro ranomaso lava sisa ny fiainako tato ato. Izahay mivady anefa vao aingana no nanapakevitra fa hiteraka amin'izay. Simban'ny olona ny fiainako tsy hitako izay aleha sy atao sy ambara ny fianakaviana. Miala tsiny mijapy ny sujetnao.
Kivy aho. Omeo torohevitra fa aza latsaina
Par: miezaka be
Date: 16 mars 2018 - 07:37
Futur belle maman<<<tena mampalahelo be ahy ny tantaranao sady mahavaky fo no mampi te hisaraka saingy mahaiza miezaka mampitony ny fonao, nareo nefa mieritreritra ny hiterak atsy ho atsy, mbola vonona ve ianao, ary ilay vadinao, sao mantsy efa ireconnaitre an le zanany any izy ka ianao lasa tsinontsinona, vita mariage v ki nareo raha tsy mahadiso, mety mbola sarotra be aminao ny hamela azy aloha fa tena ankino tanteraka amin`ny ao ambony kia, izy mahalala zay mahasoa antsika rehetra.
Date: 16 mars 2018 - 08:26
miezaka be<<< merci akia. Hatramin'io andro io izahay tsy dia niresaka firy aloha, tsy haiko hoe satria ve mbola feno loatra ny foko sady tsy hitako izay ambara azy. Ny tena marina tsy sura aho amin'izay tiako atao, hisaraka, hiteraka aminy koa ve? Tsy haiko,ny fantatro aloha dia za koa te hanana ny zanako, tena tia zaza aho ary tsy mety amin'ny saiko izany hoe tsy ho reny izany, tsy hoe ho belle-mèren'olona fa ho mère fotsiny. Tsy mangataka zvt be dia be aho.
Eny akia vita mariazy ara-dalana izahay soratra sy tany ampiangonana. Ohatrany hoe efa lavitra be izany ny voady nifanekena, tsy mbola nifeter ny 5ème anniversaire akory dia efa izao sahady. Te hiteny hoe tsy vanona ry zareo nefa vadiko izy, manontany azy aho hoe inona no tiany ataoko lazainy tsy fantany fa izy indray no mbola hieritreritra aloha, tiako ho darodarohana be izany satria izy no diso dia izy indray no haka saina, tena tsy vanona ny olona e. Na izy milaza hi-reconnaitre izany zanak'olona izany aza amiko tokony mangataka ny autorisation-ko, izaho ve no adala. Misy fomba mety hananako ve ahafahako manakana azy tsy hireconnaitre io zaza io, mety hoe ratsy toetra aho fa ry zareo no nitady ahy, amin'io ra mba mangataka oe afaka mi-reconnaitre io zaza io ve aho fa tonga dia mi-imposer fotsiny, tiako ho darodaroana be. Za alo ra zao etat d'esprit ko izao tena tsy vonona ny hamela azy aho izay any aoriana no tsy hay. Olona ohatr'izany ve no handeha ataoko rainjanako, lehilahy tsy fanao ianao. Azafady eto aminareo eto no mba afaka amborahako ny foko nefa tena tsy mety afaka.
Date: 16 mars 2018 - 08:48
futur belle maman >> Ny ahy dia tsotra raha mbola tsy misy zaza tonga dia misaraha. Aleo mieritreritra fianinana vaovao miaraka amin'ny olona vaovao fa mbola korontana lavitra mihoatra an'izao hy miandry anao any aoriana any raha mbola mivady ianareo.
Averiko ihany fa zara aza mbola tsy misy zaza
Date: 16 mars 2018 - 09:13
Futur belle maman
Choix ny andi: 1- na mijanona dia manaiky ny fisian'ny zaza, zanany voalohany io, tena important aminy fa tsarovy, ary matoa nampahafantariny dia ts ahamenatra azy no ipresenter amin'ny havany, ho eo fona ilay zaza na fety io na inona na inona fa tsarovy
2- Na mandeh ndri, pour mille et une raison. Rah antanina n ol oe iza no tiny, ny voalohany sa ny fahroa? Ny fahroa no valiny, satria ts sah tena ni-s'engage tany izy rah tena ti anao.
Tsy misy oe vita inona sy inona, fa raha any no mahasambatra azy dia tsofy rano izy, matoa izy milaza fa ieritreritra dia ao raha, ny fiainanao banjinina. Harary fo sy hiafy mandritra ny dimapolo taona hoavy v zany ianao?
Raha tapa-kevitra handeh ianao dia aza mihaino vavan'olona, fa ts ny olona akory no izaka n alahelonao isan'andro, na iaramonina am'ol ef ts atokisana tsony sns, mandinih tsara d ze ahsambatra anao atao, tsy ambany lalàna tsik fa ambany fahsoavana
Date: 16 mars 2018 - 09:34
Futur belle maman,
Tena mafy be ki izany mahazo anji zan sad tena tsapako be a, na d tsy mahazo ahy ary ilay izy an, za efa mananjanaka ray ka mety tsy hanana choix fa hiafy eo raha mahenon tranga otrzany ataon`ny vadiko fa nji tena mbola manana choix be mihitsy, tena marina ny an`i mialy14 fa nji sisa ny choix, na hizaka d sady hananjanaka amji izy nefa efa nanana ray zokiny any sady tiany no karakarainy, ny vola tsy maintsy hizara any ivelany satria izy no niimposer anji ny fisian`io zaza io, d nji iaritra be ao satria nanao voady sady harary fo lava tsy hisy masoandro mihiratra ao, tena tsy zaka aki zany a, tena raha za manokana aloha a, na navita mariage be taknin aki za tena miala rah mbola tsy mananjanaka aminy a, tena zarako ary raha mbola tsy manana aminy aho ialako sy hanomanako ho avy amina olona ray tena assureko fa tia be ahy na d ela2 ary vao tonga zany a, betsak no efa vita mariage sy niteraka maro fa mbola midivorce aty aoriana, zao nefa mety ho mora2 kokoa zany saingy anji ki ny choix a,tadidio fa raha vitany zao zany a, d mbola hisy zandriny io zaza ivelany io ary ho pbl ho anao foana any aoriana any, refa miady nareo d mankany amle ray njai izy, sady tsy ainji rah io no tena tiany na tsy nataony mariage aza, tsy norcenn`le sipa ny izy matoa sady mireconnaitre anle zaza no mbola izy ihany koa no ieritreritra, aza mandany fotoana amina bandy otrzany kia, tena saino tsara aloha dia averiko ndray, ankino am ao ambony fa matoa misy io d natao ho zakanji sady tsy ainji, mety mila manapakevitra nji.
Rehefa mandratra be anji ki leizy d ialao fa aza mampijal;y tena a, manaova manja, mizestiava, ataovy tsara ny asa, d itanji ny vokany.
Date: 16 mars 2018 - 13:55
misaotra betsaka anareo amin'ny torohevitra. Ny olako izaho tsy hoe mbola tena tanora be fa efa début ny trentaine, sao dia taraiky be. Tena tsapako mijaly aho aloha izao, ny any aoriana no tsy haiko e.
Raha hoe fivelomana aloha hatreto tsy olana amiko satria izaho aza no mbola mikarama betsaka noho io vadiko io. Tena ingrat izy izany satria ny fianakaviana matetika manana olana ara-bola sa tsy haiko hoe manararaotra ny fahatsorako, isaky ny mihetsika mangataka fanampiana dia fitiavako ny vadiko dia manome izay azoko omena aho nefa izao no hisaorany ahy. Tena tsy rariny mihitsy. Ny kaontinay moa iraisana rahateo satria hoe mpivady, tsss. Tena mahatsiaro ho voafitaka tanteraka aho ary tsy nieritreritra hoe io olona io hanao ahy ohatr'izao. Anjely anie izany eo imason'ny fianakaviako, tena mpamitaka mihitsy.
Par: NON ET NON
Date: 16 mars 2018 - 14:35
future belle maman, tena ny fototry ny fanambadiana no nohitsakitsahan'ilay vadinao, fa azafady, tsy mendrika ny ho vadiana io lehilahy io, raha mijanona aminy ianao dia ho fahoriana mandrakizay ny fiainanao, hizara roa daholo na ny vola na ny fitiavana.
Dieny tsy misy zaza mamatotra anareo aleo miala, aleo miaina tsy misy vady toa izay hiaina fijaliana toa izao.
ianao anie tsy mbola antitra raha trentaine izany e! sady ianao olona miasa, mahita ny anjaranao foana ianao fa aza miaritra fahoriana @ lehilahy tsy vanona toa izany.
Dieny mbola tsy tara miala, sady ny volanao ihany no hakany hiterahan'ilay vehivavy sy hanaovany layette, non c'est non, efa lehilahy tsisy fitiavana anao io fa ialao malaky.
Date: 20 mars 2018 - 20:18
O ry reto a, tsy afaka manoratra azy ho zanany izy raha mbola mpivady nareo, sauf i madama ao antrano no manaiky. Zay ilay oe zaza anelanelantrano (mampalahelo eo aloha ilay zaza an). Donc tsy hitovy amin'ny zanakareo ao antrano izy ka inona ny olana?
avelao ho any fa aza maka aretin'andoha amin'izany. exiger-na fotsiny oe tsy miditra ao antranonareo. tsy fanatatrareo ko angaha ny vola miditra amin'ny vadinareo ka ahiana hibanaka be any ny fananana?
Date: 21 mars 2018 - 11:28
Marina ny tenin`i Non et non, franchement, aza mampijaly tena d ho antitra fotsiny eo kia, trentaine zany ki ts antitra a, ny fitiavany aloha efa lasan`olona fa ny anji no tsapany hoe mbola bdb d araraotiny tsara, tsy tsara ki ny miaritra anzany a, tsy tena tia izy fa ny volanao no tena tiany.
Eritrereto tsara aloha ny mety ho tohiny fa za miteny fa tsy aharitra io raha zao fandehany zao.
Par: afaka tsara ka
Date: 22 mars 2018 - 14:30
mpitsitsy<<< tsy marina izany voalazanao izany, efa somary nivoatra kely ny lalana izao ary afaka manao reconnaissance ny zaza teraka na dia efa manambady aza ny rainy ho fiarovana ny zaza. Raha misy io reconnaissance io dia manana droit amin'ny pension alimentaire io zaza io, ny montant tsy voafetra fa afaka entina eny amin'ny fitsarana raha sanatria ny rainy tsy manome io pension alimentaire io.
Ny eto Madagasikara aloha tsy haiko ny montant amin'ny pension alimentaire. Ny zavatra misy koa dia i futur belle maman mbola tsy manana zanaka, betsaka ny zavatra mety hitranga. Eo ny olana no mipetraka hoe hipetraka ambony baomba ahiana hipoaka amin'ny fotoana fantatra dia handeha am-pinoana sa hieritreritra tsara ny hoavy ary mba manana hoavy assuré fa tsy miaina anaty fanahiana lava.
Par: dada am-pielezana
Date: 22 mars 2018 - 18:38
Izaho lazaiko aminareo fa manana zanaka am-pielezana saingy ilay vehivavy indray no tsy nety ny hanekeko ilay zaza ho zanako satria koa izy manambady toa ahy.
Tsy notantarainy ahy fa talohan'ny niarahako taminy dia efa nitady zaza fahatelo izy mivady saingy tsy nety nahazo na koa tsy nahatazona zaza. Efa afa-nenina dia nanao fanabeazana aizana ilay vehivavy mba tsy hipetrahan'ny zaza intsony no nanomboka niaraka tamiko izy. Fiarahanay voalohany nanao RS, angamba herinandro taorianan'ny fanombohany ilay fanabeazana aizana tsindrona dia nitoe-jaza tamiko izy. Somary sahiran-tsaina izy hoe ahy ve sa an'ilay vadiny ilay izy satria nifanelanelana 1 semaine ny fotoana nanaovany farany t@ vadiny sy ny ahy ary tsy nisy intsony avy eo na ny ahy na ny an'ny vadiny izay lasa nandeha mission.
Nony tonga ny fotoana nanaovana echo dia probable kokoa hoe ahy ilay zaza. Nanontaniako azy ny heviny fa izaho efa vonona ny hanomana ny fiavian'ilay zaza (kojakoja sns) fa izy no tsy nety, nilaza izy fa tsy hoesoriny ilay zaza fa hotazoniny ary ho secret-ny mandra-maty sady hahatsiarovany ahy koa.
Teraka ilay zaza dia tena nitovy tamiko ny masony, ankoatr'izay dia mitovy be @ reniny. Raha tsy mandinika ny masony izany dia hoe nitera-tena ilay ramatoa.
Ny tena nahagaga anay dia niraiki-po be t@ ilay vadiny io zaza io na dia tsy anazy aza fa dia izay ilay tranga. Hatr@ izao dia asehony matetika @ fb ilay zaza mba hahafantarako azy fa izy hatreto tsy mety homena fanampiana izany fa dia anjaran'izy mivady hono izany.
Ny fikasako any aoriana, ny aina tsy mifametra, raha sanatria maninomaninona ilay vadiny dia hanampy foana aho ary hampahafantariko ny vadiko io zaza io satria izahay mivady koa efa nikasa hiteraka fanampiny kanefa tsy nety nipetraka. farany najanona.
faniriako ny hanana zaza fahatelo ary ananako izy saingy tsy afaka hahafantatra ahy io zaza io raha tsy ny reniny no hanome alalana azy hahafantatra ahy
Par: mampalahelo ny zaza
Date: 24 mars 2018 - 16:42
dada ampielezana<<< Mampalahelo ny ankizy, mbola kely dia efa miaina anaty lainga sy fitaka. Ny hevitro manokana aloha dieny mbola kely ny zaza dia atao fantatra hoe ito ny rainy na tsy atao fantany mihitsy mandrakizay. Rehefa nanapakevitra hoe tsy ho lazaina azy fa ianao no tena rainy dia mila manaja izay. Mba noeritreretinao ve hoe ahona ny fomba hiainan'ilay zaza an'izay hoe tsy io rainy io no tena rainy ary ianareo ray amandreniny samy ratsy fitondratena ary vokatr'izay fitondrantena tsy mendrika izay izy. Hanao ahoana ny handraisany ny tenany.
Ny ray amandreny manko mieritreritra hoe manana chance ilay zaza misy manome vola, misy mijery hatreny lavitra eny sns. Atao daholo izao eritreritra ampandriana saina izao. Tsarovy fa tsy ny volanao no ilainy fa fitiavan'ny ray amandreniny tsy misy conditions. Tsy hoe raha avela hitia ianao dia hitia azy. Inona no tokony ataonao ho porofon'izay fitiavanao tsy misy conditions izay, dia izay atao.
Ny ankizy amiko ankizy foana, adala ny ray amandreny dia atao izay hahasoa ny zaza. Amiko na mafy aza ho an'i futur belle maman ny reconnaissance ataon'ny vadiny amin'io zaza io dia tsarovy fa tsy nisy zaza nisafidy ny tsy hananana ray izany. Fony mbola nianatra dia nisy iray kilasy izay tsy misy anaran'ny dadany ny carnet-ny, tsy misy anaran'ny dadany ny bulletin de naissance sy ny copie. Tena complexée izy, vehivavy izy io. Hoy ny ankizy miteny moramora hoe zaza sary, tamin'izany tsy haiko ny dikany. Miresaka ny dadany ny ankizy, hitanao mangasiasy izy, nalahelo azy mihitsy aho tamin'izany. Hitanao mihitsy fa misy zavatra hafa hi-compenser-ny ilay manque, manao izay azony atao izy mba hi-accepter-n'ny ankizy azy ao ampianarana. Ny iray groupe de ménage aminy manararaotra azy satria mba te ho tian'ny ankizy dia atao izay mahafaly ny ankizy, nefa ireo ankizy ireo tsy misy tia azy. Manimba zaza mihitsy ny adalan'ny ray amandreny fa mitandrema amin'izay mbola tsy tratra.
Date: 25 mars 2018 - 14:36
Mihombon-kevitra tanteraka aminao aho ry mampalahelo ny zaza.Tsy nangataka ny ho tonga teto an-tany izy ireny!
Par: dada ampielezana
Date: 25 mars 2018 - 20:46
mampalahelo ny zaza : Ekena fa mampalahelo ilay zaza" Ny azoko antoka dia tsy hampahafantatra an'ilay zaza ny tena rainy mihitsy io reniny io fahajanony ho secret-ny mandra-maty. Raha sanatria maninomaninona ilay vadiny, mbola miankina @ reniny ny hoe hampahafantatra an'ilay zaza na tsia ny tena rainy. Izaho tsy manery azy satria azoko ny olana. Fa raha kosa tena mila fanohanana ilay reny, na ilay zaza raha misy ny olana, rehefa manaiky ny reniny dia horaisiko ho andraikitra tokoa ilay zaza satria zanako.
Izao ilay zaza mitondra nmy anaran'ilay vadin'ny mamany, manana copie ara-dalana fa biologiquement tsy zanany ilay izy.
Par: dadany koa
Date: 26 mars 2018 - 12:41
dada ampielezana<<< Betsaka ny zavatra mety hitranga amin'ny fiainana ary tsy hananatsika controle. Ny aina tsy mifametra, marina izany nefa tsy misy afaka hiteny pour sûr hoe izaho no lasa aloha na ianao. Maro ny tsy niteraka manko raha niandry certitude. Marina fa ianao père biologique fa maro ny père biologique tsy mahavita ny adidiny na ireo nahabevohoka vehivavy teny rehetra teny na ireo efa manambady aza.
Etre parent, c'est un choix. Mety ho géniteur fotsiny ianao fa ny safidinao isan'andro no mamaritra marina fa tena parent ianao na tsia. Araka ny efa voalazako teo aloha. Maro ny lehilahy na mikarakara ny zanany aza tsy nataony : manolo couches, miari-tory rehefa marary ny zaza, mitaiza sns fa dia faly ho ray eny fotsiny satria nisy apport génétique. Betsaka ny olona nananganjaza fantatro ary hita mihitsy ny différence ny zaza niriana fatratra sy ny zaza toy ny hoe suite logique ao anaty fanambadiana. Misy ny finiavana ny hitia, finiavana ny hikarakara, finiavana ny hiaritra satria cadeau lehibe izany zanaka izany. Aza manahy ianao fa na tsy père biologique-ny aza io ka bon père ho azy dia ho sambatra kokoa ny zanakao.
Par: LHHAY GASGASY
Date: 05 avril 2018 - 06:50
futur belle maman< Mapalaelo ahy ny manjo anao, fa misy fanotaniana ihany ny ahy hoe tsy olana fiterahana ve ianao io!!5ans de mariage ianareo hoe ianao zao sa diso ny zavatra voavakiko, dia naninona no tsy niteraka mihitsy!!
sao mba izay no fototry ny olana oe te hananjanaka izy dia lasa nanamboatra tany ivelany!!tsy oe moramora no fiteniko azy fa betsaka ny cas lehilahy manao an'izany, satria te hanana taranaka nefa ilay vady napiakarina tsy namokatra!
raha ny hevitro indray dia aleo dieny izao dia manao divorce ianao, efa mazava be ny porofo fa nanitsaka tokatrano izy, ilay reconnaissance matoa ataony dia satria tiany io zaza io sy ny reniny, noh izany aza manantena fitiavana aminy intsony;
foano dieny izao ilay compte mitambatra, ary aza zatra manao anio intsony any aorina fa ataony bandy fay ndry, trohany ao daolo ny volanareo roa vo gaga eo, mety fa nanamboarany trano na nividianany tany izao ilay zanany any ambadika an, vodiandro merika;
farany, aza mieritreritra be izay hevitry ny manodidina sy fianakaviana sy inona izany rehefa mandray decision, anao io fa ireo na izahay dia miresaka sy malahelo sy manoro hevitra fotsiny, sarotra ary hanala baraka ilay izy fa tsy maitsy izay no vahaolana mety aminao, aleo misaraka dieny izao, sao ka hiaritra eo dia ho avy ny zaza faharoa, fahatelo, tara loatra satria sady lany zara ianao aminizay moa very fotoana;
afaka miresaka direct isika raha tena ilainao fa tsaratsara omena soutien ambava ny firesahana aminao, mahereza